RASMI: Xilliga la sameyn doono isku aadka heerka guruubyada ee Champions League xilli ciyaareedka 2020/21 oo la shaaciyey – Gool FM
(Nyon) 09 Sebt 2020. Waxaa la shaaciyey xilliga sameyn doono isku aadka heerka guruubyada ee Champions League xilli ciyaareedkan 2020/21 iyo weliba marka la isku aadin doono kooxaha kale ee ciyaaraya koob yaraha Europa League.
Xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa maanta oo Arbaco ah ku dhawaaqay xilliga la sameynayo isku aadyada heerka Guruubyada Champions League iyo Europa League ee xilli ciyaareedkan.
Heerka guruubyada Champions League xilli ciyaaredkan 2020/21 waxaa lagu qaban doonaa xarunta ugu weyn UEFA ee Magaalada Nyon – Switzerland marka ay taariikhdu tahay 01 bisha October ee soo aaddan, iyadoo isla maalintaasna la bixin doono abaal-marinnada tartankan ee xilli ciyaareedkii 2019/20.
Dhinaca kale isku aadka heerka guruubyada ee Europa League kal ciyaareedkan 2020/21 ayaa la sameyn doonaa maalin kaddib marka la sameeyey kan Champions League, waxaana isla maalintaas la bixin doonaa abaal-marinnada UEFA Europa League ee xilli ciyaareedkii 2019/20.
Kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich ayaa ku guuleysatay tartanka Champions League, waxaana ay ku guuleysatay markeedii lixaad ee taariikhdeeda.
Geesta kale kooxda reer Spain ee Sevilla ayaa haysata oo ku guuleysatay tartanka Europa League, iyadoo sii dheereysatay rikoorkeeda kooxda ugu hanashada badan koobkan, waxaana ay qaaday markeedii lixaad.
Luis Suarez oo bartiisa Instagram-ka soo dhigay Sawir iyo Farriin xasaasi ah... (Muxuu kaga hadlay?)